သဘာဝ အတိုင်း ကိတ်ကြမယ်။ | yathar Magazine
သဘာဝ အတိုင်း ကိတ်ကြမယ်။
၁။ နို့ ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း
နို့မှာ ပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်းနဲ့ ဟိုမုန်း တွေက အင်စရိုဂျင် ကို အားကောင်းစေသည့် အတွက် ရင်သားကို တင်းရင်းစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပရိုတင်းပိုမိုပါဝင်တဲ့ ပဲနို့ ကို နေ့စဉ် သောက်သုံးခြင်းဖြစ် ရင်သားကို ကြီးထွားစေသည့် အပြင် တင်းရင်းလှပ လာစေမှာပါ။
သင်၏ ရင်သားကို အမှန်တကယ် ကြီးထွားစေချင် ရင် တနေ့တာ ရဲ့ အစားအသောက်ထဲတွင် မြေပဲ၊ သီဟိုစေ့ စသည့် အခွံမာအစေ့အဆံတွေ ကို ထည့်သွင်းစားသုံးပေးပါ။ ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အခွံမာ အစေ့အဆံတွေ ဟာ သင့် နှလုံး နှင့် ဦးနှောက် ကို ကျန်းမာစေသည့် အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပါတယ်။
အာဟာရတန်ဖိုး မြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေဟာ ကိုလက်စရော ကို ကျစေတဲ့အပြင် အသားအရေ ကြည်လင်အောင် အကျိုးပြုပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ ဟင်းနုနွယ်၊ ကညွတ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စတဲ့ ဟင်းရွက် တွေကို စားသုံးပေးခြင်းဖြစ် ပျိုမေတို့ ရဲ့ ရင်သား တစုံ ကို ပုံစံတကျ တင်းရင်း လှပနေစေမှာ ပါ။
ပုဇွန်၊ကမာ၊ခရုနဲ့ ရေညှိ စတဲ့ ပင်လယ်စာတွေက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဟိုမုန်းတွေ ကို တိုးမြင့်စေတဲ့ အတွက် နေ့စဉ်ပုံမှန်စား သုံးပေးရင် က္ကတ္ထိယ တို့ရဲ့ ရင်ခွင်တစုံဟာ အံအားသင့်ဖွယ် ဖွံထွား လာမှာပါ။
ပင်လယ်စာ ကြိုက်တတ်တဲ့ သူတွေ ဒီ စာကို မြင်ရင်ပိုစားချင်လာလိမ့်မယ်။
Cap A လောက်ဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေရင် နေကြာစေ့လေးစား၊ ဗန်ဒါစေ့ရော၊ ဖရုံစေ့ပါ ကြိုက်တတ်လိုက်ပါ။
အင်စရိုဂျင်ဆိုတဲ့ အသားရည်တင်းရင်း စေတဲ့ ဓာတ်၊ ကြီးထွားစေတတ်တဲ့ ပရိုတင်း ဓာတ်တွေ က အစေ့အဆံ ထဲမှာ အများဆုံးကိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသုံးနည်းပေမဲ့ အနောက်နိုင်ငံနဲ့ အာရှတိုက်မှာတော့ ဆေးဖော်တဲ့နေရာအထိ အသုံးပြုကြတယ်။ ပဲနံ့သာစေ့ ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အာနိသင်က ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ချ ပေးတဲ့ အပြင် ဆံနွယ်တွေ ကိုလည်း ကျန်းမာသန်စွမ်းစေတယ်။ အစာအိမ် အတွက် အကျိုးပြုရုံတင်မကပါဝူး အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာလာစဉ် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း နှင့် သွေးဆုံး ခြင်း တို့ကို လျော့နည်းအောင် အထောက်အကူ ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးဝါး တွေဖော်စပ်ရမှာလည်း အသုံးပြုကြတယ်။ အစေ့ကို ကြိတ်ပီးထုတ် ထားတဲ့ Herbal Oil ကို ရင်သားကို လူးပြီး နှိပ်နှယ်ပေးချင်း ဖြင့် ရင်သားကို ကောင်းမွန်တဲ့ ရင်သားတစုံ အဖြစ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။
အသားတွေမှာ ပါတဲ့ ပရိုတင်းဟာ လည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အင်စရိုဂျင်ကို မြင့်တင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ကြက်သားဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလျင်မြန် အားဖြစ်စေ ပီး ရွှေရင်စုံကို အသားဖြစ်စေပါတယ်။
အသီးအနှံတွေဟာ လူသားတွေ ရဲ့ အစားအစာ ထဲ က အရေးပါတဲ့ အခန်းဂဏ္ဍ မှာ ပါဝင်ပါတယ်။
Vitamin C နဲ့ အခြားသော ဓာတ်ပေါင်းတွေ ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံ တွေကို ပုံမှန်စား သုံးချင်း ဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်ကို
လန်းဆန်းစေပီး ကျန်းမာစေပါတယ်။ အင်စရိုဂျင် ကြွယ်ဝတဲ့ ဘယ်ရီသီး၊ ဘလူး ဘယ်ရီသီး၊ချယ်ရီသီးတွေဟာဆို ရင် ရင်သားကြီးထွားဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ထို အသီးတွေ အစား ပန်းသီး သည် လည်း အာနိသင် အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ. ဒီတပတ်တော့ ကိတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပျိုမေတို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို.
ပြောပြခဲ့တာပါ. စားလည်း စား၊ လေ့ကျင့်ခန်းလေး လည်းလုပ် ပေး ချင်း ဖြစ် ရင်လည်းတုန် ရင်လည်းခုန်နိုင်ကြပါစေ ရှင်။ အိုးခိုင်မော့…အကိတ်!
သဘာဝ အတိုငျး ကိတျကွမယျ
၁။ နို့ ၊ နို့ထှကျပစ်စညျး
နို့မှာ ပါဝငျတဲ့ ပရိုတငျးနဲ့ ဟိုမုနျး တှကေ အငျစရိုဂငျြ ကို အားကောငျးစသေညျ့ အတှကျ ရငျသားကို တငျးရငျးစပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ပရိုတငျးပိုမိုပါဝငျတဲ့ ပဲနို့ ကို နစေ့ဉျ သောကျသုံးခွငျးဖွဈ ရငျသားကို ကွီးထှားစသေညျ့ အပွငျ တငျးရငျးလှပ လာစမှောပါ။
သငျ၏ ရငျသားကို အမှနျတကယျ ကွီးထှားစခေငျြ ရငျ တနတေ့ာ ရဲ့ အစားအသောကျထဲတှငျ မွပေဲ၊ သီဟိုစေ့ စသညျ့ အခှံမာအစအေ့ဆံတှေ ကို ထညျ့သှငျးစားသုံးပေးပါ။ ပရိုတငျးဓာတျကွှယျဝတဲ့ အခှံမာ အစအေ့ဆံတှေ ဟာ သငျ့ နှလုံး နှငျ့ ဦးနှောကျ ကို ကနျြးမာစသေညျ့ အတှကျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျပါတယျ။
အာဟာရတနျဖိုး မွငျ့မားစှာပါဝငျတဲ့ အစိမျးရောငျ ဟငျးသီး ဟငျးရှကျတှဟော ကိုလကျစရော ကို ကစြတေဲ့အပွငျ အသားအရေ ကွညျလငျအောငျ အကြိုးပွုပါတယျ။ အမြှငျဓာတျကွှယျဝစှာ ပါဝငျတဲ့ ဟငျးနုနှယျ၊ ကညှတျ၊ ပနျးဂျေါဖီစိမျး စတဲ့ ဟငျးရှကျ တှကေို စားသုံးပေးခွငျးဖွဈ ပြိုမတေို့ ရဲ့ ရငျသား တစုံ ကို ပုံစံတကြ တငျးရငျး လှပနစေမှော ပါ။
ပုဇှနျ၊ကမာ၊ခရုနဲ့ ရညှေိ စတဲ့ ပငျလယျစာတှကေ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ဟိုမုနျးတှေ ကို တိုးမွငျ့စတေဲ့ အတှကျ နစေ့ဉျပုံမှနျစား သုံးပေးရငျ က်ကတ်ထိယ တို့ရဲ့ ရငျခှငျတစုံဟာ အံအားသငျ့ဖှယျ ဖှံထှား လာမှာပါ။
ပငျလယျစာ ကွိုကျတတျတဲ့ သူတှေ ဒီ စာကို မွငျရငျပိုစားခငျြလာလိမျ့မယျ။
Cap A လောကျဖွဈလို့ စိတျညဈနရေငျ နကွောစလေ့ေးစား၊ ဗနျဒါစရေ့ော၊ ဖရုံစပေ့ါ ကွိုကျတတျလိုကျပါ။
အငျစရိုဂငျြဆိုတဲ့ အသားရညျတငျးရငျး စတေဲ့ ဓာတျ၊ ကွီးထှားစတေတျတဲ့ ပရိုတငျး ဓာတျတှေ က အစအေ့ဆံ ထဲမှာ အမြားဆုံးကိုပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ လူသုံးနညျးပမေဲ့ အနောကျနိုငျငံနဲ့ အာရှတိုကျမှာတော့ ဆေးဖျောတဲ့နရောအထိ အသုံးပွုကွတယျ။ ပဲနံ့သာစေ့ ရဲ့ ထူးခွားတဲ့ အာနိသငျက ကိုယျအလေးခြိနျကို လြော့ခြ ပေးတဲ့ အပွငျ ဆံနှယျတှေ ကိုလညျး ကနျြးမာသနျစှမျးစတေယျ။ အစာအိမျ အတှကျ အကြိုးပွုရုံတငျမကပါဝူး အမြိုးသမီးမြား ဓမ်မတာလာစဉျ နာကငျြကိုကျခဲခွငျး နှငျ့ သှေးဆုံး ခွငျး တို့ကို လြော့နညျးအောငျ အထောကျအကူ ပေးနိုငျတဲ့ ဆေးဝါး တှဖေျောစပျရမှာလညျး အသုံးပွုကွတယျ။ အစကေို့ ကွိတျပီးထုတျ ထားတဲ့ Herbal Oil ကို ရငျသားကို လူးပွီး နှိပျနှယျပေးခငျြး ဖွငျ့ ရငျသားကို ကောငျးမှနျတဲ့ ရငျသားတစုံ အဖွဈ ထိနျးသိမျးနိုငျပါတယျ။
အသားတှမှော ပါတဲ့ ပရိုတငျးဟာ လညျး ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ အငျစရိုဂငျြကို မွငျ့တငျနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ ကွကျသားဟာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အလငျြမွနျ အားဖွဈစေ ပီး ရှရေငျစုံကို အသားဖွဈစပေါတယျ။
အသီးအနှံတှဟော လူသားတှေ ရဲ့ အစားအစာ ထဲ က အရေးပါတဲ့ အခနျးဂဏ်ဍ မှာ ပါဝငျပါတယျ။
Vitamin C နဲ့ အခွားသော ဓာတျပေါငျးတှေ ကွှယျဝတဲ့ အသီးအနှံ တှကေို ပုံမှနျစား သုံးခငျြး ဖွဈ ခန်ဓာကိုယျကို
လနျးဆနျးစပေီး ကနျြးမာစပေါတယျ။ အငျစရိုဂငျြ ကွှယျဝတဲ့ ဘယျရီသီး၊ ဘလူး ဘယျရီသီး၊ခယျြရီသီးတှဟောဆို ရငျ ရငျသားကွီးထှားဖို့ အတှကျ လိုအပျတဲ့ အာဟာရတှကေို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ ထို အသီးတှေ အစား ပနျးသီး သညျ လညျး အာနိသငျ အတူတူပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကဲ. ဒီတပတျတော့ ကိတျခငျြပါတယျဆိုတဲ့ ပြိုမတေို့ အတှကျ လိုအပျတဲ့ အစားအသောကျတှကေို.
ပွောပွခဲ့တာပါ. စားလညျး စား၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလေး လညျးလုပျ ပေး ခငျြး ဖွဈ ရငျလညျးတုနျ ရငျလညျးခုနျနိုငျကွပါစေ ရှငျ။ အိုးခိုငျမော့…အကိတျ!
ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ယမကာ ၁၀ မျိုး